Forum serasera malagasy Fitsipika - Dinika forum.serasera.org
You are here: home > Fitsipika
Mombamomba ny takelaka
Ny takelaka forum.serasera.org dia nisokatra ny 12 avril 2003 ho fanampin'ireo takelaka vokarin'ny serasera.org efa misy. Toerana natokana indrindra handinihana sy hiadian-kevitra an-takelaka momba ny lohahevitra maromaro voafaritra. Raha misy lohahevitra mahaliana anao kanefa tsy hitanao ao dia azonao ilazana ny mpitantana ny takelaka ao amin'ny admin@serasera.org
Ny forum.serasera.org dia takelaka malagasy rano iray natao ho an'ny namana mahazo ny teny malagasy mba hahafahany miady hevitra. Tsara raha vakianao tsara aloha ireto fitsipika fohy ireto alohan'ny hidiranao ho namana.
A. Ny fomba fisoratana anarana
Ny fidirana ho namana ato amin'ny namana.serasera.org dia maimaim-poana. Ny hany ilaina dia ny fanananao adiresy imailaka mazava tsara sy mandeha tsara.
Raha te handray anjara dia mila misoratra anarana ho namana. Mandehana ao amin'ny Fisoratana anarana.
Rehefa voasoratra anarana ianao dia alefanay any amin'ny adiresy imailaka (email) nampidirinao ny tenimiafina (password) ahafahanao miditra ato amin'ny takelaka. Azonao atao ny manova izany rehefa avy eo.
Ilaina tadidiana hatrany ny solonanarana sy ny tenimiafina. Raha sendra adino moa dia misy fomba fitadidiavana azy ao amin'ny vavahady (jereo eto).
Tokony hofenoinao araka ny tokony ho izy ihany koa ireo zavatra hafa toa ny anarana, sy ny sisa. Mahatsara ny fifandraisana ny fahamatorana sy ny fahamarinan'ireo mombamomba anao (Jereo eto).
B. Momba ny fitondrantena
Ny namana misoratra anarana dia manaiky fa hanaraka ny voalaza ato amin'ity fitsipika ity. Manaiky ihany koa fa ny mombamomba azy izay apetrany ato dia marina sy azo itokisana. Tsy iantohan'ny mpitantana anefa ny maha marina na tsia ny mombamomba ny namana iray.
Ny mpikambana rehetra dia manana SOLONANARANA (login na pseudo) izay ampiasainy mandritra ny fitsidihana ny takelaka. Azon'ny mpandrindra esorina avy hatrany ireo Solonanarana izay tsy manaja ny mahaolona na manohitohina ny firindran'ny takelaka na mamoafady na koa tsy mifanaraka amin'ny lalï¿½na manan-kery.
Ny namana ihany no mahalala ny TENIMIAFINA izay ampiasainy. Ny namana no tomponandraikitra voalohany amin'ny fitehirizana ny Tenimiafina izay nofidiny. Azon'ny namana atao ny manova ny tenimiafina araka izay tiany miaraka amin'ny mombamomba azy.
Ny namana izay tsy mamangy ny takelaka mandritra ny 120 andro dia voafafa ho azy ao anaty lisitra. Azony atao indray anefa ny misoratra anarana aorian'izay.
Ny forum.serasera.org dia tsy tomponandraikitra amin'ny mety ho toetra na fomban'ny namana tsirairay ao anatiny. Ankinina tanteraka amin'ny fahendren'ny namana ny momba izany.
Azon'ny tsirairay atao kosa anefa ny mandefa fitarainana momba ny toetra ratsy ataon'ny namana iray. Raha voamarina izany dia esorina tsy ho namana intsony izay ninia nanao hadisoana. Ny hafatra mandeha moa dia azon'ny mpitantana ny manala azy araka ny fitsipika voalaza etsy ambany.
Ny fitarainana mety hanesorana namana ao anatin'ny lisitra, raha voamarina, dia ny fanopana na fanozonana ny namana hafa, ny fandefasana sary na teny maloto amin'ny namana, ny fametrahana teny maloto na sary maloto ao amin'ny mombamomba ny namana.
Ny fitarainana rehetra momba ny takelaka dia azonao alefa amin'ny hery@serasera.org na koa alefa mivantana amin'ny mpandrindra ny serasera.org dia ny webmaster@serasera.org.
D. Fitsipika anatiny amin'ny forum.serasera.org
Ny namana rehetra mampiasa ny forum (tomponandraikitra, namana tsotra, mpamangy) dia manaiky fa hanaja ity fitsipika ity alohan'ny hanoratana ao amin'ny forum. Raha voaporofo ny tsy fanarahana ity fitsipika ity dia azo sakanana tsy hiditra ato amin'ny forum intsony ny tsy nanara-dalàna.
Tomponandraikitra voalohany amin'ny dinika tsirairay iandraiketany ny mpandrindra sy ny mpamorona ny lohahevitra. Raha misy fitarainana momba ny lohahevitra, anatiny sy ivelany, dia any amin'ireo mpandrindra na mpamorona azy no alefa.
Raha misy fitarainana momba ny zavatra ataon'ny mpandrindra na ny tompon'ny lohahevitra dia azo atao ny mifandray mivantana amin'ny tomponandraikitry ny takelaka miaraka amin'ny porofo.
Ny hafatra manohintohina ny fifandraisana amin'ny ompa, fanenjehana bontolo, fanaratsiana mivantana na ankolaka mihatra amin'ny namana mpikambana (amin'ny fampisehoana solonanarana), na ny tomponandraikitra, na olona hafa ka handraisana fitarainana dia hoesorina ary mety hiafara amin'ny fanesorana tsy ho namana ny mpikambana nanoratra azy.
Mba hisian'ny fifampitaizana amin'ny Teny malagasy dia ezahina ho teny Malagasy ranoray no ifandraisana ao amin'ny forum.serasera.org. Azon'ny mpandrindra ny lohahevitra esorina ny hafatra tsy mifandraika amin'izany. Azo leferina kosa ireo vaovao nalaina tamin'ny loharano hafa ka tsy voadika amin'ny teny malagasy.
Teny mendrika sy feno fifanajana no ifandraisana. Noho izany dia tsy ekena ny fisian'ny fifamaliana ara-poko sy firazanana, ara-pinoana ary ara-pirehan-kevitra
Tsy azo atao ny mampiditra dokam-barotra handraisam-bola ao anatin'ny lohahevitra tsy mifanaraka amin'izany raha tsy misy alalana manokana avy amin'ny mpitantana na ny mpandrindra ny lohahevitra.
E. Teny avy amin'ny mpandrindra
Ny serasera.org dia hiezaka hatrany hanatsara ny takelaka. Raha sanatria anefa misy ny tsy fahatomombanan'ny takelaka dia tsy voafatotra amin'izay mety ho fahaverezan'ny hafatra na famafana ny mpikambana ny mpandrindra.
Natao teto Antananarivo ny vendredi 12 avril 2003 09:58:45 Eugene Heriniaina webmaster@serasera.org
Nampiana sy nahitsy ny 23 desambra 2004
nahitsy ny and.3 teboka 6
nahitsy ny and.3 tebooka 8
Nampiana sy nahitsy ny 07 martsa 2005
nahitsy ny and.3 teboka 5
nahitsy ny and.3 teboka 7
nampidirina ny and.3 teboka 8
Nahitsy ny 10 jolay 2006
nosoloina ny and. 3 teboka 9
Nahitsy hifanaraka amin'ny fanavaozana ny takelaka ny 7 jiona 2010
Page rendered in 6.7175 seconds